आविष्कारकर्ता बन्न चाहनुहुन्छ ? अब सरकारले दिन्छ अनुदान
अर्थ नीति कर्पाेरेट समाचार
के तपाईं नयाँ खोज तथा नवप्रवर्तन गर्न चाहुनुहुन्छ ? वा आविष्कारकर्ताका रूपमा काम गर्न चाहनुहुन्छ ? वा तपाईँसँग फरक क्षमता छ र त्यो क्षमता आम मानिसको हितमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ ? यदि चाहनुहुन्छ भने सरकारले तपाईँलाई आर्थिक रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउनेछ र उक्त सीपलाई आम मानव समाजको हितमा प्रयोग गरिनेछ ।
सरकारले विनियोजन ऐन, २०७६ अनुसार नयाँ ज्ञानको खोज तथा अनुसन्धानका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो । स्वअध्ययन वा अनुसन्धानबाट सार्वजनिक हितका लागि कुनै वस्तु वा सेवाको आविष्कार गर्ने, नवप्रवर्तनीय कार्य वा उद्यमशील क्षमताको उपयोग गरी व्यावसायिक रूपमा वस्त वा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ । प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत तथा कम स्रोतको प्रयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने वा स्वउद्यम गर्ने कार्यलाई कार्यविधिले समेटेको छ ।
सरकारले छनोट भएका प्रस्तावलाई कूल लागतको बढीमा ५० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी अधिकतम रु पाँच लाख उपलब्ध गराउनेछ । सो अनुदानको रकममा आफ्नोसमेत लागत जोडेर नवप्रवर्तनको काम गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । - रासस
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १, २०७७, १८:२७:००